Manavao Ny Torapasika Versova Amin’ny ‘Fanadiovana Ny Torapasika Lehibe Indrindra Manerantany ‘ Ny Mponina Ao Mumbai · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Jolay 2017 5:26 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Nederlands, Ελληνικά, Español, Italiano, English
Ny fako plastika eo amorondranomasin'i Mumbai. Pikantsary tao amin'ny lahatsary YouTube “Nahoana no misy fiantraikany amin'ny fahasalamanao ny plastika any amin'ny Ranomasimbe ” avy amin'i Sky News. Kitiho ny sary raha hijery ny tatitra.
Any amin'ny morontsiraka andrefan'i India no misy an'i Mumbai ary izy no tanàndehibe be mponina indrindra ao India. Fantatra noho ny torapasika ny tanàndehibe, kanefa lasa mampidi-doza ho an'ny mpitsidika ireo fako mivangongo sy ny rano miangona maloto tao anatin'ny taona vitsivitsy.
Mbola misy hafa maloto kokoa noho izany aza. Juhu, Versova ary Aksa no tena maloto indrindra rehefa natao ny fanadihadihana ny torapasika miisa sivy tao Mumbai teo anelanelan'ny volana Novambra 2015 sy ny volana May 2016 .
Efa ho roa taona lasa izay, nanapa-kevitra ny handray an-tànana ny zava-misy ny mponina ao Versova, faritra manankarena iray ao Mumbai, noho ny fanentanan'i Afroze Shah, mpisolovava sady mpiaro ny tontolo iainana monina ao Mumbai .
Tsy an-kijanona! Tena toy izany ny mpilatsaka an-tsitrapo
Tamin'ny volana Oktobra 2015, nifindra tany amin'ny tranony vaovao akaikin'ny torapasika Versova i Shah, ary nahita ny fako plastika teny amin'ny torapasika, izay nahatratra hatrany amin'ny 1,67 metatra ny hatevin'ny sasany. Nanomboka nanadio ny fako izy sy ny mpifanolo-bodirindrina aminy, Harbansh Mathur, 84 taona . Nanatevin-daharana an-tsitrapo ny mponina am-polony rehefa nahita ny ezaka nataon'izy ireo, ary tokony ho fako milanja teo amin'ny 50.000 kilao teo no nesorina nandritra ny fanadiovana voalohany natao tamin'ny morondranomasina mirefy 2,5 km.
Niantso mpilatsaka an-tsitrapo hafa izy ireo mba hanaovana fanadiovana isan-kerinandro noho ireo fako aman-taonina mbola mila esorina.
Ny volana Desambra 2015, nanome fitaovana toy ny fiarabe mpitatitra fako sy milina mpitrongy fako ho an'ny mpilatsaka an-tsitrapo ny manampahefana tao an-toerana ary niova ho hetsika nandritra ny enim-bolana ny finiavana. Nitombo ho 300 isa ny mpandray anjara isan-kerinandro tamin'ny mpilatsaka an-tsitrapo avy amin'ny saranga maro samihafa. Vetivety dia niforona ny vondron'ny Mponina Mpilatsaka An-tsitrapo ao Versova (VRV) ary manavao ny fivoarany tsy tapaka ao amin'ny Facebook izy ireo .
Tamin'ny volana Jolay 2016, nahazo fankatoavana iraisam-pirenena ny ezaka nataon'ny VRV ary niantso izany ho “fanadiovana ny torapasika lehibe indrindra teo amin'ny tantaran'izao tontolo izao” ny Firenena Mikambana misahana ny Tontolo Iainana (PNUE). Tamin'ny volana Janoary 2017, nanomboka nanadio ny toeram-pivoahana miisa 52 teo akaikin'ny torapasika ny vondrona mba hisorohana ny rano maloto tsy hivarina any an-dranomasina. Tamin'ny volana Martsa 2017, nanala fako milanja 5 tapitrisa kilao teo amin'ny torapasik'i Versova fotsiny ny VRV .
Fankasitrahana ho an'ireo olona izay nanolotena tamin'ny fanentanana fanadiovana amin'izao fotoana izao.
Fijoroana vavolombelona i @AfrozShah1 fa ilaina ny finiavana mahery sy ny aingam-panahy raha hitondra fanovana
Indro ny torapasika versova adiny iray teo. Herinandro faha 85 tamin'ny fanadiovana. Tsara tarehy sy madio ny torapasika Versova ankehitriny. Nahavita izay vitantsika isika .Tokony hotandremana izany fahadiovana izany
Mameno an'i @ AfrozShah1 sy ny ekipany, BMC amin'ny fanalana ny loto tao amin'ny torapasika Versova milanja 5 tapitrisa Kg tao anatin'ny 85 herinandro, fandraisana an-tanana lehibe, aoka izany mba hanome aingam-panahy ny hafa
Ary toy izao ny fomba fijery sasany!
Tsy mampino ahy hoe ity ilay torapasika izay notsidihako tamin'ny taon-dasa ary hoy ilay namako hoe, ô lehity, ​​tena maloto izy izany.
Ary mbola teo an-toerana ireo mpilatsaka an-tsitrapo:
Mifarana ny herinandro faha 88 tamin'ny fanadiovana. Maniry amin'ny toerany ny hazo voaniho miisa 300 ao amin'ny torapasika versova .Faran'ny herinandro mahafinaritra. Miverina amin'ny fahiny isika.
Mifarana ny herinandro faha 90 tamin'ny fanadiovana. Asabotsy sy alahady, nitsimpona plastika milanja 160 taonina izahay. Raha tratran'ny orana sy tratran'ny hafanana ny mpilatsaka an-tsitrapo.
Niaiky ny zavabitan'i Shah ny PNUE tamin'ny fanendrena azy ho Tompon-dakan'ny Tany izay lokan'ny tontolo iainana ambony indrindra ao amin'ny Firenena Mikambana
Nahatonga azy ho tompondaka ny Tany ny asan'ity lehilahy ity tamin'ny famonjena ny torapasika
Nidera ny fihetsik'i Shah ihany koa ny Praiminisitra ao India Narendra Modi ho toy ny “ohatra manome aingam-panahy ” amin'ny ady amin'ny fahalotoana:
Miarahaba an'i @ AfrozShah1 ao #MannKiBaat ny PM Modi noho ny hetsika nataony tamin'ny fanadiovana ny Torapasika Versova . Arahabaina Afroz!
Niparitaka ilay hetsika fandraisana an-tanana . Ity iray ity dia avy amin'ny fanadiovana ny renirano Kahn (Khan) ao Indore, tokony ho 600 kilaometatra miala ao Mumbai:
Hetsika fanadiovana an'Indore, fanadiovana ny kanha , fanadiovana an'India miaraka amin'ny fanombohana miabo niaraka tamin'ny Atoa @AfrozShah1.
“The Lawyer Who Cleaned Mumbai's Versova Beach..”👍😊#CleanIndiaMissionpic.twitter.com/QHjNqHCnzA
Nanomboka ny “Hetsika Fanadiovana ny Renirano Khan ” ao Indore miaraka @ AfrozShah1
“Ilay mpisolovava izay nanadio ny Torapasika Versova ao Mumbai”
Ary mbola te handeha lavidavitra kokoa ny olona :
Ry rahalahy @ AfrozShah1, mihevitra aho fa ilaintsika ny hetsika faobe manerana ny morontsiraka Indiana toy ny fanadiovana an'i Mumbai , mitondra fiovana lehibe ianao amin'ny lazanao
Aorian'i Versova, moa ve ireo torapasika ao Maharashtra hahazo fanadiovana ihany koa? Mampiseho ny sasany amin'ireo ratsy indrindra i @htTweets
Araka ny PNUE , fako plastika milanja 13 tapitrisa taonina no mivarina any an-dranomasin'izao tontolo izao isan-taona ary mila mihetsika izao tontolo izao ankehitriny. Manana ohatra mahomby ny olona toy ny tao amin'ny torapasika Versova , kanefa mbola maro ny dingana ilaina mba hampihenana ny fako plastika sy ny fisorohana ny fako amin'ny fomba mahomby kokoa.